Ciidamada Haramcad oo howlgal ka fuliyay duleedka Balad Xaawo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidamada Haramcad oo howlgal ka fuliyay duleedka Balad Xaawo
Ciidamada Haramcad oo howlgal ka fuliyay duleedka Balad Xaawo
Ciidamada Haramcad ay wehliyaan Ciidamada Nabad sugida ayaa shalay howlgal qorsheesan ka fuliyay deegaano kuyaala duleeda degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaas oo fariisimo ku lahaayeen dagaalyahano katirsan Al Shabaab.
Saraakiisha hogaamineysay howlgalka ay fuliyeen Ciidamada Haramcad iyo NISA ayaa sheegay in ay bur buriyeen fariisimo Al Shabaab ku lahaayeen Tuulada Caracase oo qiyaastii 30km u jirta Degmada Balad xaawo.
Taliyaha Xasilinta Gobolka Gedo Bakaal Kooke ayaa sheegay in howlgalkan ujeedka ay u fuliyeen uu ahaa sidii ay dadka uga dulqaadi lahaayeen dagaalyahanada Al Shabaab, waxa uuna xusay in ay tagi doonaan goob walbo ay joogaan Al Shabaab.
Ciidamada Haramcad ee ku sugan degmada Balad xaawo ayaa halkaasi loo geeyay sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ciidanka uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan oo dagaal looga saaray duleedka Balad Xaawo.
Maqaal horeSomaliland oo ogolaatay in dib loo furo isku-socodka dadweeynaha Labada dhinac
Maqaal XigaSoomaliya oo 30-sano kadib bilaabeysa bixinta Leesinka Diyaaradaha